SMD OEM SMD pcb ဟာဖယောင်းစက္ကူဖောက်သည်ဒီဇိုင်း Smt pcba ဟာဖယောင်းစက္ကူအဘို့အ Smt ဂဟေ pcba Smt ဟာဖယောင်းစက္ကူ - SMD OEM SMD pcb ဟာဖယောင်းစက္ကူဖောက်သည်ဒီဇိုင်း Smt pcba ဟာဖယောင်းစက္ကူပေးသွင်းများအတွက်တရုတ် Smt ဂဟေ pcba Smt ဟာဖယောင်းစက္ကူ,စက်ရုံ -WMD
နေအိမ် » ထုတ်ကုန်များ » SMD ဟာဖယောင်းစက္ကူ
SMD OEM SMD pcb ဟာဖယောင်းစက္ကူဖောက်သည်ဒီဇိုင်း Smt pcba ဟာဖယောင်းစက္ကူအဘို့အ Smt ဂဟေ pcba Smt ဟာဖယောင်းစက္ကူ
ငါးပိ Gerber ဖိုင်ပေါ်တွင် အခြေခံ.
foam စက္ကူ ထုပ်ပိုး
500*430မီလီမီတာ / 1pcs
လေဆာဖြတ်တောက်မှုဟာဖယောင်းစက္ကူ၏ကောင်းကျိုးများ, အကြွင်းအကျန်မရှိပဲချွန်ထက်ဖြတ်အနား, အတိအကျငါးပိလျှောက်လွှာ, တိများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောထုတ်လုပ်မှု, ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတထုတ်လုပ်မှု. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Smt ဟာဖယောင်းစက္ကူအားလုံးသည်များမှာ 100% လေဆာရောင်ခြည်-ဖြတ် Full-ခက်ခဲသံမဏိ, ယနေ့စျေးကွက်အပေါ်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကို finish ကိုသေချာ. ကျနော်တို့ကအရမ်းအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းများအားဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်လေဆာ cutted ဟာဖယောင်းစက္ကူထောက်ပံ့.
တို့ကကုန်ထုတ်လုပ်မှု LPKF လေဆာ,
ပစ္စည်း : အစွန်းခံသံမဏိ
ထူသော : 0,10 / 0,13 / 0,15 / 0,18 / 0,20မီလီမီတာ
Electrolytic သန့်ရှင်းရေး အထူးသဖြင့်ဒဏ်ငွေစေးအစိတ်အပိုင်းများများအတွက်
Delivery ကြိမ်2wds.
PCB အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်အခါတစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့သည် CAM file ကိုကိုင်တွယ်နှင့်ငါးပိ Gerber ပေးသွားမှာပါ, ထို့နောက်ဖယောင်းစက္ကူ PCBs နှင့်အတူတင်ပို့နိုင်ပါတယ်.
အဆိုပါ PCBs ပျဉ်ပြား assemblyed အခါအဓိကအသုံးပြုဟာဖယောင်းစက္ကူ.
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘုတ်အဖွဲ့ 1 FR4 မာကြောနှင့်အတူအလွှာ ENIG 2oz PCB
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘုတ်အဖွဲ့2FR4 မာကြောနှင့်အတူ OSP 0.5oz PCB ထပ်ထား